သင့်ကား ရေလည်အုံ ကောင်း/မကောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? ရေလည်အုံ မကောင်းရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲ?
ကြည့်လိုက်တော့ ရေတိုင်ကီ (radiator) အပေါ်က ရေတွေယိုနေပါတယ်။ သေချာစစ်ကြည့်တော့ ရေတိုင်ကီအဖုံး (radiator cap) မကောင်းတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ရေတိုင်ကီအဖုံးကို လဲခိုင်း၊ ရေပြန်ထည့်ပြီး စက်နှိးစမ်းတော့ ရေတွေလျော့သွားတာနဲ့ ရေလည်အုံ (water pump) ကိုစစ်လိုက်တော့ ရေလည်အုံပျက်ပြီး ရေတွေယိုနေတာ တစ်ဆက်တည်း ထပ်တွေ့ရပါတယ်။
ကားတစ်စီးရဲ့အင်ဂျင်ဟာ အတွင်းပိုင်းမီးလောင်ပေါက်ကွဲတဲ့ (internal combustion engine) ဖြစ်တာကြောင့် အင်ဂျင်ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ သတ်မှတ်အပူချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာ ထိန်းထားရပါတယ်။ ပြောချင်တာက မပူလွန်း၊ မအေးလွန်းအောင် ထိန်းထားမှ အင်ဂျင်ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်မယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ အဲဒီနေရာမှာ အင်ဂျင်ရဲ့ အပူချိန်မလွန်ကဲအောင်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အအေးပေးစနစ် (cooling system) လုပ်ငန်းမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်။
ရေတိုင်ကီ (radiator)၊ ရေလည်အုံ (water pump)၊ ပန်ကာ (fan)၊ သာမိုစတတ် (thermostat)၊ ရေပြန်ဘူး (coolant reservoir or expansion tank) အစရှိသည်ဖြင့် အဓိကပစ္စည်းတွေနဲ့ အခြားအသေးစိတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါသေးတယ်။
အဲဒီတွေထဲကမှ ရေလည်အုံ (water pump) ကအအေးပေး စနစ်အတွက် အဓိက အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ ဒီရေလည်အုံဟာ impeller လို့ခေါ်တဲ့ ဒလက်နဲ့လည်ပတ်တဲ့ ပန့်ဖြစ်ပြီး အင်ဂျင်ရှေ့ခြမ်းလို့ခေါ်တဲ့ နေရာက တိုင်ပင် ဗတ်ကြိုး (timing belt) ကာဗာတွေအောက်မှာတည်ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ရေလည်အုံခေါ် ပန့်ကိုမောင်းနှင်ပုံက အင်ဂျင်ကို မောင်းနှင်တဲ့ belt ကြိုးနဲ့တွဲဖက်မောင်းနှင်ပါတယ်။ အင်ဂျင် belt ကြိုးလည်ရင် ရေလည်အုံလိုက်လည်တဲ့သဘောပါပဲ။ အဲဒီလိုလည်တော့ ပန့်မှာပါတဲ့ ဒလက်တွေက ရေ ဒါမှမဟုတ် coolant တွေကို အင်ဂျင်ထဲကိုစီးဆင်းစေပြီး အင်ဂျင်အပူချိန်ကိုလျော့ချပေးတာပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် ရေလည်အုံ (water pump) ကို အကြမ်းခံ၊ အသုံးခံနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ရေလည်အုံ (water pump) တစ်လုံးဟာ မိုင် ၉ဝ,ဝဝဝ ကနေ မိုင် ၁၂ဝ,ဝဝဝ အထိခံပါတယ်။ တချို့ကားတွေကတော့ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် အဲဒီလောက်မိုင်မရောက်ခင်ပဲ ပျက်ဆီးတတ်ပါသေးတယ်။
ရေလည်အုံ (water pump) ပျက်စီးမယ်ဆိုရင် ပြသမယ့် လက္ခဏာရပ်တွေ
ရေ ဒါမှမဟုတ် coolant တွေက timing belt ကြိုးကာဗာအောက်မှာ ယိုကျနေမယ်၊ စိမ့်ကျနေမယ်။ အဖြစ်များတာကတော့ လည်ပတ်နေတဲ့ရေတွေ coolant တွေမယိုအောင်ထိန်းတဲ့ ရေလည်အုံ (water pump) ရဲ့ ပါကင်ပြားလို့ ဝပ်ရှော့ဆရာတွေခေါ်တတ်တဲ့ gasket တွေဟာသက်တမ်းလွန်ပြီး ပျက်စီးတာ၊ ဒါမှမဟုတ် အပူချိန်ကြောင့် ပျက်စီးပြီး ရေနဲ့ coolant တွေစိမ့်ထွက်လာတာ။ အဲဒီလိုလက္ခဏာစတွေ့ပြီဆို သင့်ကားရဲ့ ရေလည်အုံ (water pump) လဲရတော့မယ့် လက္ခဏာရပ်ပါပဲ။
ရေလည်အုံ (water pump ) ပူလီ (pulley) ချောင်မယ်၊ အသံထွက်မယ်၊ ရေလည်အုံမှာရှိတဲ့ ပူလီကို ရှေ့နောက်ကစားကြည့်လို့ အဲဒီဟာက လှုပ်နေမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ရေလည်အုံ (water pump) ရဲ့ဘယ်ရင် (bearing) တွေပွန်းစားနေပါပြီ။ မကြာခင်ပျက်စီးတော့မှာပါ။ အဲဒီ ဘယ်ရင် ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင် ရေလည်အုံ (water pump) က မလည်ပတ်တော့ဘဲ အင်ဂျင် heat တက်တာတွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။
ကားဆရာတွေသတိထားသင့်တာကတော့ ရေလည်အုံ (water pump) ကနေ ညည်းသံတွေ၊ ကြိတ်သံတွေထွက်နေပြီဆိုတာကို သတိပြုနားစွင့်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ စက်လည်နေချိန်မှာ ရေလည်အုံ (water pump) ကို သွားထိစမ်းသပ်တာမျိုးကို ဆင်ခြင်ရမှာပါ။ (အသံထွက်တာကတော့ အမျိုးမျိုးရှိပါသေးတယ်။ AC compressor၊ power steering pump တို့ကလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်)
ရေလည်အုံ ပျက်စီးစေတဲ့ အခြားတစ်ချက်က အင်ဂျင်အအေးပေးစနစ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အအေးခံရည် coolant အစားသာမာန် tap water ခေါ်တဲ့ ဘုံဘိုင်ရေတွေကိုအသုံးပြုတာပါ။ သာမာန်ရေနဲ့ coolant တွေရဲ့ အဓိကခြားနားချက်တွေက ရေဆူမှတ်ကွာခြားတာ (ပုံမှန်ရေက 100 ံC မှာ ရေဆူပါတယ်) ပါ။ Coolant တွေရဲ့ ရေဆူမှတ်က သာမာန်ရေတွေထက်ပိုပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က သံချေးတက်တာပါ။ ရိုးရိုးရေတွေဟာ သူတို့သွားရာလမ်းတစ်လျှောက်အင်ဂျင်နဲ့ အခြားသံထည်၊ သတ္ထုထည်ပစ္စည်းတွေကို သံကြေးတွေနဲ့ ဂျိုးတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ Coolant တွေကတော့ ဒီလို သံကြေးတက်မှုတွေ၊ သတ္ထုကြေးတက်မှုတွေကို အကာကွယ်ပေးပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က coolant တွေကိုလက်နဲ့ ကိုင်ကြည့်လိုက်ရင် စေးစေးပျစ်ပျစ်နဲ့ lubricant ဆိုတဲ့ ချောဆီဓာတ်ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့သွားရာ၊ လည်ပတ်ရာ လမ်းတစ်လျှောက်ကို ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ လည်ပတ်စေပါတယ်။ ပိုပြီးတော့လည်း seal ဖြစ်ပြီးလုံခြုံစေပါတယ်။
ဒါကြောင့် coolant သုံးစွဲတာဟာ ရိုးရိုးရေသုံးတာထက် အင်ဂျင်ကြေးတက်မှု၊ ရေလည်အုံ ပျက်စီးမှုတို့ကို အများကြီးသက်သာစေတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ coolant သုံးစွဲမှုနည်းပါးပြီး ရေလည်အုံတွေကို သက်တမ်းမကုန်ခင် ပျက်စီးစေတာ တော်တော်များပါတယ်။ ဝပ်ရှော့ရောက်လာတဲ့ ရိုးရိုးသာမာန်ရေ အသုံးပြုထားတဲ့ ကားတော်တော်များများရဲ့ ရေလည်အုံတွေကို စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ရင် ရေကြောင့် သံချေးတက်ပျက်စီးဖို့ အလားအလာတွေများနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေလည်အုံ သက်တမ်းကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ရိုးရိုးရေအစား coolant သုံးစွဲပေးဖို့ အကြံပြုတင်ပြချင်တာပါ။
Coolant သုံးတဲ့နေရာမှာလည်း Concentrated နဲ့ PreMixed ဆိုပြီး အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပြီး Concentrated ဆိုတာကတော့ အရပ်ခေါ် အဆီပါ၊ အဲဒီအဆီကို ဒီအတိုင်း အသုံးပြု မရဘဲ ရေနဲ့ရောစပ် အသုံးပြုရပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ 1:1 ရေ ၁ ဆ အဆီ ၁ ဆ ရောစပ်အသုံးပြုရတာများပါတယ်။ ဒီအဆီတွေကိုလည်း ဒီအတိုင်း ရေမရောစပ်ဘဲ အသုံးပြုရင် အင်ဂျင်နဲ့ ရေတိုင်ကီတွေ ရေရှည်မှာ ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Concentrated အမျိုးအစား၊ အဆီအမျိုးအစားဝယ်မယ်ဆို ရေရောအသုံးပြုပေးရပါမယ်။
PreMixed ကတော့ စက်ရုံက တစ်ခါတည်း အချိုးကျရောစပ်ပြီး အသင့်သုံးစွဲနိုင်တဲ့အမျိုးအစားပါ။ ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ Stallion တို့ Toyota တို့စသည်ဖြင့်အမျိုးအစားမျိုးစုံရှိ ပြီး အသင့်ရောစပ်ပြီးသား coolant တွေရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ ဘာမှ ရောစပ်စရာမလိုဘဲ အသင့်ထည့်ရုံပါပဲ။
နောက်ဆုံးတစ်ချက် သတိထားပေးရမှာကတော့ temperature gauge က ပုံမှန် အလယ် cold နဲ့ hot ကြားထဲမှာ တည်ငြိမ်မနေဘဲ နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက် အတက်အကျ မမှန်ဖြစ်လာမယ်။ အဲဒါဆိုရင် သင့်ကား ရဲ့ (cooling system) အအေးပေးစနစ်ထဲက တစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် ရေလည်အုံ (water pump) မှာ ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘဲ error တက်နေပါပြီ။
ရေလည်အုံ (water pump) ချို့ယွင်းနေတာတွေကို သတိမပြုမိဘဲ ကားဆက်မောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ အနိမ့်ဆုံး အင်ဂျင်ပူတက်ပြီး ထိုးရပ်သွားတာကနေ အကြီးမားဆုံး အင်ဂျင်တစ်ခုလုံးပျက်ဆီးသွားနိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။